Icciitiin loltoonni Hindii 54 waggoota dheeraa dura achi buuteen dhibame hiibboo ta’eema jira - BBC News Afaan Oromoo
Icciitiin loltoonni Hindii 54 waggoota dheeraa dura achi buuteen dhibame hiibboo ta’eema jira
Goodayyaa suuraa Loltoota Hindii bara 1971 keessa Paakistaan keessatti booji'aman
Bara waraanaa sana keessa mootummaas ta'e maatiin loltoota badanii kanaa karuma karaan barbaadaa turan. Ta'us garuu eessa akka jiran baruu hin dandeenye.
Akka namoonni baayyeen tilmaamanitti loltoonni 54 kun yeroo Hindiin biyya Paakistaan waliin wal waraansarra turte kiyyoo diinaa keessa galuu malu, sirriitti eessa akka gahan baruuf garuu hibboo ta'ee hafeera.
Hidhattoonnii IS 18 loltoota Nijeeriifi biyyoota birootiin ajjeefaman
Xayyaarota seena qabeessa Oromiyaan dagatte
Hindiif Paakistaan bara 1947, 48 akkasumas bara 1965 keessa wal waraanaa turan. Bara 1971 keessa ammoo Hindiin humnoota foxxoquuf yaalan gama Baha Paakistaan jiran deggeruun lola guyyoota 13n akka biyyi haaraa Paakistaanirraa cabdee akka uumamtu taasisaniiru. Biyyattiin kunis Baangilaadish dha.
Goodayyaa suuraa Maatiin loltoota achi-buuteen isaanii dhabamne abdii kutachuu hin dandeenye
Hindi loltoonni 54 kun lola bara 1965 keessa ture irratti booji'amanii akka mana hidhaa Paakistaan keessa jiranitti amanaa turte. Haatahu malee, waggoota 40 oliif ragaan eessa akka jiran agarsiisu argamuu hin dandeenye.
Baatii Hagayya darbe keessa bulchiinsi Naareendiraa Moodii loltoota badan 54 dabalatee walumaa galatti loltoonni 83 ta'an ugguramanii akka jiran dubbataniiru.
Bara haaraa daangaa Itiyoo-Eertiraa irratti
Gaazexeessituun Hindii beekamtuun Chaandiraa Suuta Dogiraa jedhamtu sanadoota hedduuu walitti qabuudhaan loltoonni badan kunneen eessa akka jiran baruudhaaf qorannoo gaggeessaa turteetti. Sanadoota hedduus dubbisuufi sakatta'uudhaanis kitaaba maxxansiiftee turte.
Goodayyaa suuraa Firoota lotoota Hindii achi buuteen isaanii dhibame
Kitaabni qorannoo gaazexeessituun kun maxxansiifte icciitii loltoota kanaa ni hiika jedhamee abdatamee ture.
Gazexeessituun kun loltoota sana keessaa 15 isaanii akka du'an dubbatti. "Maaliif mootummaan amanuu akka hin barbaadne naaf galuu didus loltoota achi buuteen isaanii dhibame 54 keessaa 15 akka du'an mootummaanillee odeeffannoo ni qaba," jette Chaandiraan.
Kana ta'ees garuu wantonni wal mormisiisaa ta'an hedduun jiru. Akka fakkeenyaatti, bara 1965 keessa waraanni sun xumuramee waggaa tokkoon booda loltoota sana keessaa maatii loltuu tokkootti akka du'e mootummaan himee ture.
Bara 1974 keessa garuu waggoota 8 booda jechuudha yeroo loltoonni Paakistaan keessatti hidhamanii turan gadi dhiifamanii deebiyanitti loltuun du'eera jedhamee ture Paakistaan keessa lobbuun akka jiru dhugaa bahan. Akkas ta'ees isaan booda ammoo wanti uumame hin turre.
Goodayyaa suuraa Loltoota Paakistaan booji'aman, bara 1971
Bara 1971 keessa erga lolli xumurameen booda Hindi loltoota Paakistaan 93,000 yeroo deebistu Paakistaan ammoo loltoota booji'amanii turan 600 qofaa Hindiif deebiste. Yeroo sana irraa kaasee waggoota dheeraatiif ministiroonni muummee gara aangootti dhufan Paakistaan waliin marii tasisaniiru.
Mariin isaan taasisan tokkollee garuu loltoota achi buuteen isaanii hin beekamne kun maatii isaanii waliin wal agarsiisuu hin dandeenye.
Bara 1983 akkasumas bara 2007 keessa maatiin loltoota kanaa suura qabatanii manneen hidhaa Paakistaan keessa barbaadanillee namni 'argeera' jedhu hin argamne.
Haata'u malee, barbaacha isaanii bara 2007 keessa tureen loltoonni bbadan kunneen lubbuun akka jiran kan mirkaneessu oduu argatanillee ministirri dhimma biyya keessaa Paakistaan mirkaneeffannoo waan hin kennineef barbaachi ture hin milkaa'in hafeera.
Jihaadistootni kaampii shaakala loltoota Ameerikaa Somaaliyaa jiru haleelan
30 Fuulbana 2019